DHAGEYSO Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeele oo ku baaqay in loo gurmado dadka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Star FM May 15, 2018
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeele Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo xalay ka qayb galay munaasabad casho sharaf ahayd oo gudoonka aqalka Sare ee Soomaaliya uu u sameeyay gudoomiyeyaasha baarlamaadana maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowlada Soomaaliya iyo gudiyada dib u eegista Dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in magaalada Jowhar oo caasimada u ah maamulka hirshabeele ay qarka u saaran tahay inay go’doonto maadaama ay biyuhu buux dhaafiyeen.
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeele ayaa ku baaqyan in wax laga qabto xaaladaha ka taagan gobolada Hiiraan iyo Shabeele oo uu ku fatahay wabigu shacab badana ay dhibaato ka soo gaartay ayadoo gobolka uu sheegay inay dhibaatooyin kale ka taagan yihiin.
Dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Axmed Cali Xaashi oo isna ka mid ahaa masuuliyiintii xalay ku sugnaa munaasabadaas ayaa soo jeediyay in dib u eegista dastuurka Soomaaliya aan marnaba laga qayb galin dowlado shisheeyo oo ay noqoto arin u gaar ah umada Soomaaliyeed.
Sidoo kale wuxuu sheegay in arimaha ku saabsan dib u heshiisiinta ayadana bulshada Soomaaliyeed laga dhigo arin soomaaliyada u gaara
← Madaxweynaha Faransiiska oo cambareeyay rabshadaha ka taagan Qaza
DHAGEYSO Barnaamijka Hoggaanka Star, Qaxootiga 15-05-2018 →